Puntland Oo U Digtay Gancsatada Baada Siisa Alshabaab. AwdalMedia Awdalmedia Puntland Oo U Digtay Gancsatada Baada Siisa Alshabaab.
Maamulka gobolka Mudug ee Puntland ayaa digniin culus u diray ganacsatada Al-Shabaab ku taageera dhaqaallaha iyo kuwa aan taageerin howlgallada ciidamada ee ka socda gobolka Mudug ee looga soo horjeedo Al-Shabaab.
Guddomiyaha gobolka Mudug ee maamulka PuntlandCabdilatiif Muuse Nuur (Sanyare) ayaa sheegay in ganacsatada magaalada Gaalkacyo ay ka doonayaan inay qeyb ka noqdaan dagaalka ay kula jiraan Al-shabaab, isagoo ugu hanjabay ganacsadihii lacago baad ah siiya Al-shabaab ay tallaabo ka qaadayaan.
Waxaa uu sheegay in xaalad ammaan ah hadda ay ku sugan tahay degmada Gaalkacyo qeybta Puntland tan iyo markii ay bilowdeen howgallada ka dhanka ah Ururka Al-Shabaab.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale isku difaacay eedeymo ku aadana in aysan caddaalad helin 18 qof oo dhawaan lagu toogtay Gaalkayco ka dib markii lagu helay Al-Shabaabnimo.